नेपालको जग्गा कब्जा गरेपछि चीनले भुटानमाथि दाबी गरेको छ ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home BannerNews नेपालको जग्गा कब्जा गरेपछि चीनले भुटानमाथि दाबी गरेको छ !
नेपालको जग्गा कब्जा गरेपछि चीनले भुटानमाथि दाबी गरेको छ !
काठमाडौं । भारतसँगको चीनको सीमा विवादले यस क्षेत्रका अन्य भागहरूमा आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई अस्पष्ट बनाइदिएको छ। एक दुर्गम सीमावर्ती जिल्लामा बेइजिङले नेपाली भूमि आफ्नो कब्जामा लिएको खबर आएपछि नेपालमा अचानक चीन विरोधी भावना बढेको छ । नेपालको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले बेइजिङलाई क्लिन चिट दिन हतार गरेको कुराले सहयोग गरेको छैन। भुटान अर्को उदाहरण हो, चीनले थिम्पुलाई पश्चिममा डोक्लाम पठार हस्तान्तरण गर्न दबाब दिँदै उत्तरमा भुटानी भूभागमा आफ्नो दाबी त्याग्न बदलामा। पूर्वी भुटानमा रहेको सक्तेङ वन्यजन्तु अभयारण्यमा चीनको दाबी अझ चाखलाग्दो छ। यहाँ कुनै देखिने चिनियाँ सीमा छैन तर यसले बेइजिङलाई निरुत्साहित गरेको छैन।
बिहीबार नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक काठमाडौं पोष्टले “ बेपत्ता भनिएको नेपाल–चीन सीमामा रहेको पिलर नम्बर ११ फेला परेको ” शीर्षकको समाचार छापेको छ । नेपाली भूभागमा चिनियाँले बनाएको संरचना साँचो हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउन अब सहज हुने स्थानीय अधिकारीको भनाइ छ ।
यो प्रतिवेदन आउनुअघि नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौं पोष्टले उक्त संरचना, वास्तवमा भवनहरू २०१६ मा देखेको र स्थलगत निरीक्षणपछि अन्तरमन्त्रालय टोलीले ती करिब १ किलोमिटर चिनियाँ भूभागभित्र रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मन्त्रालयले भन्यो: “दुई देशबीच भएको सीमा सन्धि र सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलका आधारमा नेपाल र चीनबीचको सीमा रेखाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएको थियो। नेपाल र चीनले सिमानाका विषयमा सधैं घनिष्ठ सञ्चार कायम राखेका छन्।
र यसअघि पनि चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता झाङ सीले भनेका थिए, ‘नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद छैन, जुनसुकै सीमा समस्यालाई मैत्रीपूर्ण वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ।
तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनलाई जुन गतिका साथ क्लिन चिट दिएको छ, त्यसले विपक्षी दलको आशंका र आशंका बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बेइजिङको उपद्रवलाई ध्यानमा राखेर हेर्न मात्रै इच्छुक रहेको आशंका छ ।
चीनसँग सीमा जोडिएको पूर्वी हुम्ला जिल्लाको दुर्गम इलाकामा निर्माण कार्य भएको बताइएको छ । चिनियाँ घुसपैठ र निर्माण गतिविधि अगस्टमा स्थानीय अधिकारीहरूले देखेका थिए जसले पीएलए र चिनियाँ सीमा गार्डहरूको उपस्थिति रिपोर्ट गरेका थिए। चिनियाँहरूले नेपाली भूभागमा एक किलोमिटर भित्र भवन बनाएको र यो जानकारी तत्कालै काठमाडौंमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । पछिका रिपोर्टहरूले त्यहाँ 11 वटा भवनहरू थिए, जसमध्ये एउटा चिनियाँ कर्मचारीहरूले ओगटेका थिए भने अरू खाली थिए।
अन्य चार सीमावर्ती जिल्ला गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा चिनियाँ अतिक्रमणको खबर आएको छ । जुनमा नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा चीनले सडक निर्माणको बहानामा नेपाली भूमि कब्जा गरिरहेको र त्यहाँ चिनियाँ सीमा चौकीहरू आउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको नापी विभागले चीनले ३३ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको बताए पनि विपक्षी राजनीतिज्ञले भने ६४ हेक्टर जमिन रहेको बताए । चीनले आफ्नो भूभाग विस्तार गर्नका लागि नदीहरू डाइभर्ट गरिरहेको दाबी समेत गरेको छ ।
संसारभरि, भूमि र पानीको स्वामित्व र नियन्त्रण सार्वजनिक भावनाको मुख्य चालक हो र सडकमा चीन विरोधी क्रोधको उत्थान स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यसलाई आंशिक रूपमा राजनीतिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ तर नेपालले धान्न नसक्ने मेगा बाँधलगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि सम्भावित जग्गा विनियोजनमा सार्वजनिक चिन्तालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
नेपाल चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) मा जोडिएको छ र आयात बढिरहेको छ। व्यापार घाटा लगातार बढ्दै गएको र भारतसँगको तुलनामा कम हुँदा काठमाडौंमा चिन्ता बढेको छ । काठमाडौंमा चिनियाँ स्वामित्व र सञ्चालित व्यवसायको फैलावटले चिनियाँ वर्चस्वको डर बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीनसँगको अनन्त मित्रताको सार्वजनिक पेशालाई हेर्दा सरकारले त्यसलाई मुद्दा नबनाउने सन्देश जाँदै गरेको नेपालको प्रतिपक्षीले सोचेको छ । यो चिनियाँलाई सराहनीय रूपमा उपयुक्त हुनेछ तर नेपालको भौगोलिक अखण्डताको मूल्यमा। र भारतीय अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले यस मुद्दामा नेपालको नरम पेडलिङको फाइदा उठाएर नेपाली भूमिमा आफ्नो दाबी बढाउन सक्छ।
भुटान र चीनले चार वर्षको अन्तरालपछि आगामी केही महिनामा विवादित सीमामा २५ औं चरणको वार्ता गर्ने भएका छन् । यस वर्षको सुरुमा तय भएको वार्ता कोरोनाका कारण स्थगित भएको थियो । यदि थिम्पु होसियार भएन भने, चीनले पश्चिम र मध्य भुटानमा पीएलए द्वारा अतिक्रमणको रिपोर्टलाई ध्यानमा राखेर यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ।
पश्चिम भुटान, विशेषगरी डोक्लाममा चीनको दाबी नयाँ होइन। चीनले लामो समयदेखि २६९ वर्ग किलोमिटरको डोक्लाम पठार चाहेको छ किनभने यसले तिब्बतको चुम्बी उपत्यकालाई हेर्छ। भारतसँगको शत्रुताको अवस्थामा, थिम्पु र दिल्ली बीचको लामो सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले उपत्यकामा आफ्ना सेनाहरू सिक्किममा भारतीय सेना र सम्भवतः डोक्लाममा भारतीय सेनाहरू बीच निचोल्ने डर छ।
डोकलामको नियन्त्रणले चीनलाई अन्य फाइदा पनि दिन्छ। यसले चीनलाई पूर्वमा भारतको ज्युगुलर नसाको नजिक ल्याउनेछ, जसको अर्थ सिलगढी कोरिडोर हो: मुख्य भूमिलाई पाँच उत्तरपूर्वी राज्यहरू (असम, नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, मेघालय र मणिपुर) सँग जोड्ने राजमार्गको साँघुरो भाग। त्यसैले चीनले २०१७ मा भारतबाट रोकिएपछि पनि दोक्लाम पठारमा आफ्नो स्थितिको फाइदा उठाउन निरन्तर अतिक्रमण र “बढ्दो निबलिंग” मार्फत चालबाजी गरिरहेको छ।
रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि पीएलए एकाइहरू दक्षिण डोकलाममा प्रवेश गरेका छन् र भुटानी गोठालाहरूलाई यस क्षेत्रबाट बाहिर रहन चेतावनी दिएका छन्। अन्य रिपोर्टहरूका अनुसार पीएलए पश्चिमी भुटानको ड्रामाना र शाखातो लगायतका भागहरूमा ४० किलोमिटर गहिराइमा प्रवेश गरेको हुन सक्छ। चीनले आशा गर्दछ कि जब र जब सीमा वार्ता पुन: सुरु हुन्छ, यो आफ्ना सर्तहरूमा समाधान गर्न बाध्य हुने स्थितिमा हुनेछ। बदलामा यो उत्तरी भुटानको जाकारलुङ र पासमलुङ उपत्यकामा आफ्नो दाबी त्याग्न तयार रहेको बताइएको छ।
त्यो कथाको एउटा अंश मात्र हो। जुन देखि, चीनले पूर्वी भुटानको एक भाग दावी गरेको छ, यो सानो राज्यमा थप दबाब दिनको लागि गणना गरिएको छ। अचम्मको कुरा के छ भने, पूर्वी भुटानको चीनसँग एकदमै सानो सीमा छ, यसले बेइजिङलाई यस क्षेत्रमा ३००० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी दाबी गर्नबाट रोकेको होइन। अड्कलबाजी यो छ कि चीनले भुटानलाई छोड्ने अरुणाचल प्रदेशको तवाङमा आफ्नो पुरानो दाबीलाई हेरेर यसलाई उठाएको हो। चिनियाँहरू भन्छन् कि यो क्षेत्र पुरानो दिनमा तवाङ गुम्बा अन्तर्गत परेको थियो र यो 17 औं शताब्दीमा मात्र भुटानीहरूले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यो गोलपोष्ट सार्ने पुरानो रणनीति हो, जुन चीनले विगतमा गरेको थियो। उदाहरणका लागि, सन् १९५९ मा भारतले पूरै सीमा विवादित भएको बताएको थियो। सेन्काकु टापुहरूको सन्दर्भमा जापानसँग र स्प्रेटली र पारासेल टापुहरूको सन्दर्भमा भियतनामसँग पनि त्यस्तै भयो।
सीमा वार्ता पुनः सुरु हुँदा पूर्वी भुटान पनि चिनियाँ एजेन्डामा हुने अनुमान गरिएको छ।
Previous articleशेखर-गगन टिम जित्दै, देउवाको हार निश्चित
Next articleचीनको खतरनाक कदमको पर्दाफास: ढुवानी कन्टेनरहरूमा मिसाइलहरू लुकाउँदै,के हो कारण ?